Rohingya Students Forum: November 2016
Hádis ót accé hozorot Ali (r) ar hozorot solman faresí (r) duní zoneruwaiyot goijjé dé, Huzur (s)efórmaiyedé nisor gún gorónor dara goribi boni bó.
Nomas foitté gaali goron yá cúri don
Fozorór Nomas no foréde morot fuwain/maiyya fuwain
Fozorór Nomas no forí códori tejarotót nealon
Bela uzór Nomas forí mottón mosít óttú neali zon
Telawotesójida ré woktór uoré nogorí deri gorón
Uzu banai baiccót duniyaibi hotá hon
Uzu sára Quraan córif dóron
Fori giyoí dé hána re abar feñrai no hón
Hána hai soun noduí rakón
Hát ar gal oré duwaror mugót boi dúwon
Mug ar gal oré nizor bazir hañsa loi fuson
Hát no duí hón
Hái baáde fade zinis loí dat gutón
Gusól fóros oiyé dé mancóttú gaa no duí hána hon
Foñsa hána okkól oré hón
Hórat magoyattú hána okkól kini hón
Murdar muúntú boi hón
Deccí, fatila, son okkól or báñgattú estemal goron
Baf maa ré kermos nogorí tákon
Ustat okkol oré biyadofi gorón
Baf maar hókym oré no manon
Baf maa ré nam dóri dakon
Lalsí bicí on
Bola zuri ádama góri hoón
Misá soun goron
Misá hotá hoón
Becáta hotár adot tákon
Ataraf loi bála gorí talluk no goron
Bekub okkól loi becí bíron
Egena guictí loi bála gorí talluk no goron
Fuwain cúwain ar gorba ókkol oré dam no don
Nizor fuwain óre cáb don
Nizor tiyañ, elóm, takot or bol loi arek zon oré duk doon
Nizor mocitillá mancór age age solon
Boic ola murobbir age añri zon
Duwar, kirkiri re latí marí kúlon
Raitta lenda gúm zon
Taim no oíté gúm ottú urón
Beil uré fán gúm zon
Bicí gúm zon
Uidat fecáb goron
Gadúwat fecáb gorón
Fecáb fehéna gorát hotá hon
Fecáb goré dé zagat Uzu goron
Báñga foñní loí matá añsuron
Tíyat matá añsuron
Uin oré ziyañta erí don
Mocár zal okkól oré gorót sáf nogorón
Sáta okkol górot thalai eron
Nok óre date hoñron
Zer or nisor ar boñlor kec oré keñsi loi haron
Cantár sára tákon
Cantár kúledé zagat boi hotá Houn, gúmzon
Holom, fincoil or muinna ya guriré téñge úñron
Fiñas, Roun ór bahol furat doun
Gór , duwan ot Sába, añka, kuñir, nicár botol, bak seta roñg okkól tákon
Gana, dúl, tal ókkol fúnon
Dol, toñcá, baiskút soon
Bát rañdí baiccót, gór kusai baiccót gana gon
Maiya fuwain ol górot ouk baaré ouk fura furi gúijja no dé hoor loi tákon
Hócom ór uoré wafadari no raké dé bibi
Osin mancóré hóraf nozore soón
Hor finát fára sílon
Tíyat bómbi finón, boirát fori banón
Mogirib or októt sarag no dóron
Mogrib ar Ecár ór mazé gúm zon
Magoyaré hasgori raittá fírai don
Tokdir oré biccaic no goron
No lági fózul hóssa goron
ဆင်းရဲကျပ်တည်းခြင်းကို ဖြစ်စေသော အချက်များ
ဟဒီးစ်တော်တစ်ရပ်တွင်လာရှိသည်မှာ အလီ (ရသွေ့)သခင်နှင့် စလ်မာန်ဖာရ်စီ (ရသွေ့) သခင်နှစ်ပါး ကဆင့် ပြန်ခဲ့သည်။ တမန်တော်မြတ်(ဆွ) မိန့်တော်မူသည်မှာ အောက်ပါအချက်များကိုပြုမူ ခြင်းဖြင့် ဆင်းရဲတခြင်းကိုဖြစ်ပေါ်စေပါသည်။
(၁) ဆွလာသ်ဖတ်ရန်ပျင်းရိခြင်း (သို့) လက်လွတ်ခြင်း
(၂) ဖဂျရ် ဆွလာသ်ဝတ်မ ပြုသော အမျိုးသား/အမျိုးသမီး
(၃) ဖဂျရ် ဆွလာသ်ဝတ်မ ပြုဘဲ စီးပွားရေး၊ ဈေး၊ လုပ်ငန်းဆောင်တာသို့သွားခြင်း
(၄) အကြောင်းမဲ့ဝတ်ပြုပြီးပြီးခြင်းဗလီဝတ်ကျောင်းတော်မှ ထွက်ခွါခြင်း
(၅) စဂ်ျဒါဟ်သေလာဝသ်ကို အချိန်မီမပြုဘဲ ကြန့်ကြာစေခြင်း
(၆) ဝိုဇူပြုရာတွင် လောကီစကားပြောခြင်း
(၇) ၀ိုဇူမရှိဘဲ ကုရ်အာန် ကျမ်းမြတ်ကိုင်တွယ်ခြင်း
(၈) ကျသွားသောအစားအစာကို ပြန်လည်ကောက်ယူမစားခြင်း
(၉) စားသုံး၍ပန်းကန် ကိုမဆေးဘဲထားခဲ့ခြင်း
(၁၀) လက်နှင့်ပါးစပ်တို့ကို တံခါးဝတွင် ထိုင်၍ဆေးကြောခြင်း
(၁၁) လက်နှင့်ပါးစပ်တို့ကို မိမိအင်္ကျီအနားနှင့်သုတ်ခြင်း
(၁၂) လက်မဆေးဘဲစားသောက်ခြင်း
(၁၃) စားသောက်ပြီးနောက် ရရာတုတ်ဖြင့်သွားကြားထိုးခြင်း
(၁၄) ရေချိုးရန် တာဝန်ထိုက်သူသည်ရေမချိုးဘဲ အစားအစာ စားသုံးခြင်း
(၁၅) ပုပ်သိုးနေသောအစားအစာများကို စားသုံးခြင်း
(၁၆) သူတောင်းစားများထံမှ စားသောက်ဖွယ်ရာများ ဝယ်ယူခြင်း
(၁၇) သူသေ၏ ရှေ့တွင်ထိုင်၍ အစားအသောက်စားခြင်း
(၁၈) အိုး၊ ခွက်၊ ပန်းကန်၏ပဲ့နေသောနေရာမှ အသုံးပြုခြင်း
(၁၉) မိဘများကိုဝတ်ကြီး၊ ၀တ်ငယ်မပြုဘဲ နေခြင်း
(၂၀) ဆရာသမားများကို မရိုမသေပြုခြင်း
(၂၁) မိဘ၏အမိန့်ကို ဖီဆန်ခြင်း
(၂၂) မိဘကိုအမည်တပ်၍ ခေါ်ဆိုခြင်း
(၂၅) လိမ်လည်၍ ကျိန်ဆိုခြင်း
(၂၈) ညစ်ညမ်းသောစကား ပြောဆိုသောအလေ့အထ ရှိခြင်း
(၂၉) ပတ်ဝန်းကျင် အသိုင်းအဝိုင်းနှင့် ကောင်းစွာမဆက်ဆံခြင်း
(၃၀) ငတုံး၊ ငအ၊ အပျော်လွန်သူများနှင့်များစွာ ရောနှောနေထိုင်ခြင်း
(၃၁) ဆွေမျိုးသားချင်းများနှင့်ကောင်းမွန်စွာ မဆက်ဆံခြင်း
(၃၂) သားသမီးများနှင့် ဧည့်သည်များအား တန်ဖိုးမထားခြင်း
(၃၃) မိမိတို့၏သားသမီးများအား ကျိန်ဆဲခြင်း
(၃၄) မိမိအင်အား၊ ငွေကြေး၊ ပညာဂုဏ်မောက်မ၍ တစ်ပါးသူအားဒုက္ခပေးခြင်း
(၃၅) မိမိထင်ပေါ်ကျော်ကြားရေးအတွက် လူတို့အရှေ့မှဖြတ်လျှောက်ခြင်း
(၃၇) တံခါး၊ ပြူတင်းပေါက်စသည်တို့ကိုခြေ နှင့်ကန်၍ဖွင့်ခြင်း
(၃၉) အချိန်မတော်အိပ်ရာမှ နိုးထခြင်း
(၄၀) နေထွက်သည်အထိ အိပ်စက်ခြင်း
(၄၁) များစွာအိပ်စက် ခြင်း
(၄၂) တစ်လစ်စလစ်အပေါ့ သွားခြင်း
(၄၄) ကျင်ကြီးကျင်ငယ် စွန့်နေချိန်စကား ပြောခြင်း
(၄၅) ကျင်ငယ်စွန့်သောနေရာ၌ ၀ိုဇူပြုလုပ်ခြင်း
(၄၆) ဘီးအကျိုးဖြင့် ခေါင်းဖြီးခြင်း
(၄၇) မတ်တပ်ရပ၍ ခေါင်းဖြီးခြင်း
(၄၈) သန်းကို အရှင်လွှတ်ပစ်ခြင်း
(၄၉) ပင့်ကူအိမ်အား အိမ်တွင်းမှ မရှင်းလင်းခြင်း
(၅၀) အမှိုက်သရိုက်များကို အိမ်တွင်း၌စပုံထားခြင်း
(၅၁) လက်သည်းများကို သွားဖြင့်ကိုက်ဖြတ်ခြင်း
(၅၂) ချက်အောက်နှင့် ချိုင်းမွှေးများကို ကပ်ကြေးဖြင့်ညှပ်ခြင်း
(၅၄) ဖိနပ်ချွတ်သောနေရာ၌ထိုင်၍ စကားပြောခြင်း၊ အိပ်ခြင်း
(၅၅) ကလောင်တံ(သို့) ခဲတံ၏ချွန်စများကို ခြေဖြင့်နင်းခြင်း
(၅၆) ကြက်သွန်နီ၊ ကြက်သွန်ဖြူအခွံများကိုမီးရှို့ခြင်း
(၅၇) အကြင်အိမ်၊ ဆိုင်၌သက်ရှိဓာတ်ပုံ၊ ပန်းချီကားချပ်၊ခွေး၊ အရက်ပုံး၊ ကျားကွက်များရှိနေခြင်း
(၅၈) သီးချင်း၊ ဗုံ၊ ဆိုင်းသံများနားထောင်ခြင်း
(၅၉) ပြဇာတ်၊ ပွဲသဘင် (ရုပ်ရှင်)ကြည့်ရှုခြင်း
(၆၀) ထမင်းချက်သောအခါဖြစ်စေ၊ တ့မြက်စီးလှဲသောအခါဖြစ်စေ၊ သီချင်းဆို၍ပြုလုပ်ခြင်း
(၆၁) အမျိုးသမီးများ မလုံခြုံသောအ၀တ်အစားများကိုဝတ်ဆင်လျက် (အိမ်၌ဖြစ်စေ၊ အပြင်၌ ဖြစ်စေ) ရှိနေခြင်း
(၆၂) ခင်ပွန်းအပေါ် သစ္စာမဲ့သောဇနီးသည်
(၆၃) ဈေး၊ ရုံး၊ ဆိုင်များတွင် သူစိမ်းတစ်ရံစာ (အမျိုးသား/ အမျိုးသမီး)များအား မကောင်းသောအမြင်နှင့် ကြည့်ခြင်း
(၆၄) အ၀တ်အစားကို ၀တ်ဆင်ထားလျက်စုတ်ပြတ်နေသော နေရာအား ခြုပ်ခြင်း
(၆၅) အ၀တ်အထည်ဖြင့်လ-ှဲကျင်းမှုပြုလုပ်- ခင်း
(၆၆) မတ်တပ်ရပ်၍ဘောင်းဘီဝတ်ခြင်း၊ ထိုင်၍ခေါင်းပေါင်း ပေါင်းခြင်း
(၆၇) နေ၀င်မိုးချုပ်အချိန်တွင် မီးမထွန်းခြင်း
(၆၈) မဂ်ရိဗ်နှင့်အေရှ ကြားတွင်အိပ်ခြင်း
(၆၉) တောင်းရမ်းသူကို အထူးသဖြင့်(ညအချိန်) လက်မဲ့ပြန်လွှတ်ခြင်း
(၇၀) ဇေနာ ကာမေသုမိစ္ဆာကံကျူးလွန်ခြင်း
(၇၁) သတ်(က်)ဒီး၇်အား မယုံကြည်ခြင်း
(၇၂) မလိုအပ်ဘဲ အပိုသုံးစွဲခြင်း
ကိုးကား]>>> နာဖေအွလ်ခလာအစ်(က်) ကျမ်း
Posted by Rohang king at 10:16 AM
Zuroya: Faida Halu
O Cóhidi, o cóhidi, o cóhidi, o cóhidi.......
Tuáñr uore fura koum ottú fohór (2)
Foran diyó tuñí dec ólla nizor -2
Aññrár uoré yián ehsan tor o cóhidi o cóhidi
Tuáñr uore fura koum ottú fohór - (2)
Ducmon ólor lac oré oddó aññára ijjot bakcíc goijjí - (2)
Nizor Górot gór dilam yián Ruáiñgár caan erí- (2)
O cohidi o cohidi
Dil or tukça di dilam aññára bái buzi - (2)
Ador oré komjuri buijjé hondilla beimani - (2)
No goijjo, no goijjo
No goijjo gumra mancóré dórmór nam di- (2)
Ossé khuda tuáñrar oilé aññár ó soñliinná noni - (2)
No tulic no tulic
No tulic nafak nozor aññárar decór uoré - (2)
Kirmai banai félaiyum aññar nam Arakan - (2)
Baade o cohidi - (2)
Baade een cohidi laçair zór forer bairár loorór - (2)
Nokcá ttú búzi zaibi goi ziyán tor sinno - (2)
Foran diyó tuñí dec ólla nizor -2,
Aññrár uoré yián ehsan tor
O cohidi, o cohidi, o cohidi, o cohidi.........
Súr: O Shahido>>>>>Dil Pardesi Ho Gaya
￼မုစ်လင်မ်ဗိသုကာ အမျိုးသမီးသုးံဦး ဂုဏ်သိက္ခာကြီးမားသော အဂ္ဂါခန်းဆုရရှိ
￼ ￼ ￼ ￼ ￼ ￼ ￼￼ ￼ ￼ ￼ ￼ ￼ ￼ ￼ ￼ ￼ ￼
တင်ဆက်သူ - စိုးမင်း
အဂ္ဂါခါန် ဗိသုကာဆု ထူထောင်သူ Aga Kahn IV
အဆိုပါဆု Aga Khan Award for Architecture အား ကမ္ဘာတလွှားက မုစ်လင်မ်ထုအတွက် ထူးချွန်ပြောင်မြောက်တဲ့ အဆောက်အဦး ဗိသုကာဒီဇိုင်းရေးဆွဲပေးခဲ့သူ ဗိသုကာပညာရှင်များဖြစ်သည့် ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံမှ မာရီနာ တဘာစ္ဆုမ် (Marina Tabassum)၊ အီရန်မှ လိုင်လာ အာရဂျီအန် (Leila Araghian) နှင့် အီရတ်မှ ဇာဟာ ဟဒစ် (Zaha Hadid) တို့ ချီးမြင့်ခံရသည်။
၆၉ နိုင်ငံမှ နောက်ဆုးံအဆင့်ဝင်ရောက်သူ ၃၄၈ ဦးတို့အနက် ဖော်ပြပါသုးံဦးတို့ ဆုရရှိကြောင်း ယူအေအီး (UAE)နိုင်ငံ၊ အဘူဒါဘီမြို့တွင် Oct3ရက်နေ့က ကြော်ငြာခဲ့သည်။
ဘိုင်အိတုရ် ရိုဖ် ဝတ်ပြုကျောင်း ပုံ (၁)
ဘိုင်အိတုရ် ရိုဖ် ဝတ်ပြုကျောင်း အတွင်းပုံ (၂)
ဘိုင်အိတုရ် ရိုဖ် ဝတ်ပြုကျောင်း
အတွင်းထောင့်မှ အလင်းတန်းကျနေ ပုံ (၃)
ဘိုင်အိတုရ် ရိုဖ် ဝတ်ပြုကျောင်း အတွင်းပုံ (၄)
ဘိုင်အိတုရ် ရိုဖ် ဝတ်ပြုကျောင်း အတွင်းခေါင်မိုးပုံ (၅)
ဘိုင်အိတုရ် ရိုဖ် ဝတ်ပြုကျောင်း အတွင်းခေါင်မိုးပုံ (၆)
ဘိုင်အိတုရ် ရိုဖ် ဝတ်ပြုကျောင်း ပုံ (၇)
ဘိုင်အိတုရ် ရိုဖ် ဝတ်ပြုကျောင်း ပုံ (၈)
ဘိုင်အိတုရ် ရိုဖ် ဝတ်ပြုကျောင်း ပုံ (၉)
မာရီနာမှာ ၂၀၁၂ ခုနှစ်ကပြီးစီးခဲ့သည့် ဧရိယာ ၇၅၄ စတုရန်းမီတာ ကျယ်ဝန်းသော ဗိုင်အသုလ်ရူးဖ် ဗလီကြီး (Bait Ur Rouf Mosque) အား ဗိသုကာဒီဇိုင်းလုပ်ပေးခဲ့သည်။ ယင်းဗလီကြီးတွင် လေးဘက်လေးတန် မီးအလင်းရောင်ခြယ်ထားပြီး လေးထောင့်ကွက်တွင် အဝိုင်းပတ်ပုံစံထွင်ထားကာ နမာဇ်ဝတ်ပြုခန်းမှာ ခမ်းနားဆန်းကျယ်လှသည်။
တိုင်ဗီယတ် တံတားကြီး ပုံ-၁
တိုင်ဗီယတ် တံတားကြီး ပုံ-၂
တိုင်ဗီယတ် တံတားကြီး ပုံ-၃
အီရန်ဗိသုကာမှာ တီဟီရန်မြောက်ပိုင်း ပန်းခြံနှင်္စခုဆက်ထားသော အလျား (၂၇၀) မီတာ ရှည်လျားသည့် Tabiat Pedestrian တံတားကြီးမှာ ထူးခြားပြီးတောင်ရှုခင်းများကိုမြင်နေရသည်။
အိစ္စာဏ် ဖဲရစ်ကျောင်း ပုံ- ၁
အိစ္စာဏ် ဖဲရစ်ကျောင်း ပုံ- ၂
အိစ္စာဏ် ဖဲရစ်ကျောင်း ပုံ- ၃
အိစ္စာဏ် ဖဲရစ်ကျောင်း ပုံ- ၄
အိစ္စာဏ် ဖဲရစ်ကျောင်း ပုံ- ၅
အီရတ်ပညာရှင်၏ ဒီဇိုင်းမှာ The Issam Fares Institute နိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေးနှင့်ပြည်သူ့မုဝါဒရေးရာ
တက္ကသိုလ် ဖြစ်သည်။ Floating ပုံစံပုံဖော်ထားသည့်ခေတ်အမှီဆုးံ လက်ရာတစ်ခုဖြစ်သည်။
Posted by Rohang king at 1:08 AM
ယုံ​ပေးပါ​နော်​ အစ်ကိုကြီး [Biccáic goijjó ó Bodda] ယျာတင်ကဗျာ
Háiyoñg Halí, Kuwar bil ót Melitéri yé furat deddé sába
Biccáic Goijjó Ó Bodda
Torjuma- Fáida Halu
Nowambor maicó eddók oíye,
Cító accé aññrár hañsé.
Mancór mugór Supar-san ó uli accé.
Futfuitta zunáb foorót aññí hátdí sai.
O durór aññarár fara gán ót zai.
Gorom hor horé fusár noloic o boddá,
Mottú eñté hor oddó gúittó nái.
Biccáic goijjó ó bodda.
Supar-sanor foore sáf-sáf gorí deházár,
zonom diyédé fara aññár.
Horé aññár gór, nodekí hañdat bocí.
Uff... gelgói néki,
biínná dóijje dé oinot furi.
Oin dóra doyaré aññí bála siní,
Hímmot nolár hoité, dhorór báki.
Aññár gór aññí furir hoí elzamdi,
TV hóbor loí óiye ulda nóní.
Aññár bái giyé horé nozaní,
Guzori guzori aññi dakir.
O bái ekká matsaná meerbani gorí,
Aññará dái baccot tuwaité oddó fórsut nái.
Nizor foran nize basaité ,
hoto kucíc gorá foijjé.
Zobinottú longca marer,
Ambor ottú hábar jañs di féler.
Fourón mockil bumbarir.
Dilot laiggé dhoror zilha.
Dán kuñrá yó hóliddá oíyé,
Dai nófarídé yíanó báiggó oiyé,
Be gór ólar sóri boinné.
Dán kuñrár cére guzi tái,
Ek cara oddó bísáni nái.
Cít óre juwab dité beráibár nái.
Aññrár rait oré supar-sane yó mainné hár,
Binná beil urá saito mone saar.
Kintu, acá nái ekfúra basibár.
Ítara ai dorí mari félaibó fánlar.
Dudór zadu hañder hondillá,
Boddac noaí maitto mone hoor latiyá,
Hairé...monot uitté dilot ekkán,
Fuwar maa hál faraíté haiyé guli.
E fuwattú búkke fálla hoí nofarír,
Hañda aiyér aró barí barí.
“Super-sanor zoler furni,
O fútu bongor hañdani,
Ú...wa saásai suk kúli."
Kulot bazai ceér zurai yí.
Hánta noói hañda aró giyé barí.
Mottú oddó fúañré hainto mone saar.
Posted by Rohang king at 11:10 AM
The Ten Stages of Genocide (ဂျင်းနိုးဆိုဒ်အန္တရာယ်၏ အဆင့် (၁၀) ဆင့်)
ဂျင်းနိုးဆိုဒ်အန္တရာယ်၏ အဆင့် (၁၀) ဆင့်
The Ten Stages of Genocide by Gregory H. Stanton, President of Genocide Watch
ဂျင်းနိုးဆိုဒ် (လူမျိုးပျက်သုဉ်းအောင်သေကြေစေခြင်း)သည် ကြိုတင်မှန်းဆ၍ရသော အဆင့် (၁၀) ဆင့် ရှိသော်လည်း ထိုအဆင့်များသည် အရှိန်အဟုန်လျော့ကျခြင်းမရှိသော အဆင့်များဖြစ်သည်။ ထိုအဆင့် များမှာ တစ်ခုပြီးမှ တစ်ခုဖြစ်လာသည်ဟုဆိုနိုင်ခြင်းမရှိသကဲ့သို့ တပြိုင်တည်းလည်း ဖြစ်ပေါ်နိုင်ပေသည်။ ထိုအဆင့်များမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည်။
၁။ ခွဲခြားသတ်မှတ်ခြင်း (Classification)
“ငါတို့” နှင့် “သူတို့” ဟူ၍ခွဲခြားသတ်မှတ်ခြင်းသည် ယဉ်ကျေးမှုတိုင်း၌ရှိသည်။ ထိုသို့ခွဲခြားသတ်မှတ်ရာတွင် လူမျိုးစု၊ လူမျိုး၊ ဘာသာ၊ နိုင်ငံသား ဟူ၍ခွဲခြားသတ်မှတ်လေ့ရှိသည်။ ဥပမာ - ဂျာမန်လူမျိုးနှင့် ဂျူးလူမျိုး ၊ ဟူးတူးလူမျိုး (Hutu)နှင့် တွတ်စီလူမျိုး (Tutsi) တို့ဖြစ်သည်။
၂။ သင်္ကေတသတ်မှတ်ခြင်း (Symbolization)
ထိုကဲ့သို့ ခွဲခြားသတ်မှတ်ရာတွင် နာမည်တပ်ခေါ်ခြင်း (သို့မဟုတ်) သင်္ကေတတပ်ပေးခြင်း ပြုလုပ်တတ် ပါသည်။ ဂျူးလူမျိုး (သို့) ဂျစ်ပ်စီလူမျိုးကို ၎င်းတို့၏ အသားအရောင် ဝတ်စားဆင်ယင်မှု စသည်တို့ဖြင့် ခွဲခြား သတ်မှတ်လေ့ရှိသည်။ ထိုကဲ့သို့ သတ်မှတ်ခြင်းသည် လူ့သဘာဝဟုဆိုနိုင်၍ လူဇာတ်ဖျက်ခြင်း (Dehumanization) မြောက်မှသာလျှင် ဂျင်းနိုးဆိုဒ်ဟုဆိုနိုင်ပေသည်။ ထိုသင်္ကေတများမှာ အပြုခံရသူများ၏ ဆန္ဒမပါပဲ သတ်မှတ်ခြင်းမျိုးဖြစ်သည်။ ဥပမာ- နာဇီအစိုးရလက်ထက်တွင် ဂျူးလူမျိုးများအား ကြယ်ဝါတံဆိပ် အတင်းအကြပ် ဝတ်ဆင်စေခြင်း၊ ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံ၌ ခမာနီများက အရှေ့ဇုံဒေသမှ လူမျိုးများအား အပြာရောင်လည်စည်း ဝတ်ဆင်စေခြင်းတို့ဖြစ်သည်။
၃။ ခွဲခြားဆက်ဆံခြင်း (Discrimination)
အထက်စီးရသော အုပ်စုသည် ဥပဒေ၊ ထုံးတမ်း အစဉ်အလာ၊ နိုင်ငံရေးအာဏာကို အကြောင်းပြ၍ ကျန်အုပ်စု၏ ရပိုင်ခွင့်ကို တားမြစ်ပိတ်ပင်တတ်သည်။ အားနည်းသော အုပ်စုအား ၎င်းတို့၏ အများပြည်သူ ရပိုင်ခွင့်များ ပိတ်ပင်ခံရခြင်း၊ နိုင်ငံသားပြုခွင့် ပိတ်ပင်ခြင်းများ ပြုလုပ်တတ်ကြသည်။ ဥပမာ- ၁၉၃၅ ခုနှစ် နျူရင်ဘာဂ်ဥပဒေများအရ ဂျူးလူမျိုးများ မှာ ဂျာမန်နိုင်ငံသား ဆုံးရှုံးခဲ့ရပြီး အစိုးရဌာနများနှင့်တက္ကသိုလ်များ၌ အလုပ်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခွင့်ပိတ်ပင်ခံရသည်။ မြန်မာနိုင်ငံတွင် ရိုဟင်ဂျာ မူဆလင်များအား နိုင်ငံသားပြုခွင့် ပိတ်ပင်ခြင်းသည် နောက်ထပ်ဥပမာတစ်ရပ်ဖြစ်သည်။
အုပ်စုတစ်စုသည် ကျန်အုပ်စုအား လူဇာတ်ပျက်စေအောင်ဆောင်ရွက်သည်။ အခြားလူအုပ်စုအား တိရိစ္ဆာန်နှင့်နှိုင်းယှဉ်ခြင်း၊ ကြွက်၊ ပိုးမွှား၊ ရောဂါများနှင့် နှိုင်းယှဉ်ခြင်းများပြုလုပ်တတ်ကြသည်။ ထိုသို့ပြုခြင်းအားဖြင့် လူသတ်မှုကိုရွံမုန်းသော လူ့သဘာဝတရားကို ကျော်လွှားစေသည်။ အရေးအသားဖြင့် သော်လည်းကောင်း၊ လေလှိုင်းမှ တစ်ဆင့်သော်လည်းကောင်း အပြုခံရသော လူအုပ်စုကို သိက္ခာ ကျစေသည်။
၅။ ဖွဲ့စည်းခြင်း (Organization)
ဂျင်းနိုးဆိုဒ်သည် အမြဲတစေ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အစီအစဉ် ဖြစ်ပေသည်။ များသောအားဖြင့် နိုင်ငံတော် တစ်ရပ်က ကျူးလွန်တတ်ပြီး ပြည်သူ့စစ်များ အသုံးပြုလေ့ရှိသည်။ ထိုမှသာသက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံ၏ တာဝန် ရှိနေခြင်းကို ငြင်းပယ်နိုင်ပေသည်။ ဥပမာ- ဒါဖြူး(Darfur) ဒေသ၌ ဂျန်ဂျာဝိဒ်(Janjaweed) အုပ်စုကို အသုံးချခြင်းဖြစ်သည်။
၆။ အစွန်းရောက်စေခြင်း (Polarization)
အစွန်းရောက်ဝါဒီများသည် အုပ်စုများအကြား သွေးကွဲစေသည်။ အမုန်းတရားအားပေးသော အဖွဲ့များသည် အစွန်းသို့တွန်းပို့သော တရားများကို ဟောပြော ထုတ်လွှင့်တတ်သည်။ ဥပဒေအကြောင်းအရ လူမျိုး တစ်မျိုးနှင့်တစ်မျိုးအကြား ထိမ်းမြားလက်ထပ်ခြင်းနှင့် လူမှုဆက်ဆံခြင်းကို တားမြစ်သည်။ အစွန်းရောက် အကြမ်းဖက်သမားများသည် အလယ်အလတ်အပြုသမားများကို ရန်လိုလာသည်။
၇။ ကြိုတင်ပြင်ဆင်ခြင်း (Preparation)
အမျိုးသားရေး (သို့) ကျူးလွန်သောအဖွဲ့သည် ဂျူးလူမျိုးသော်လည်းကောင်း၊ အာမီးနီးရင်းလူမျိုး(Armenian) သော်လည်းကောင်း၊ တွတ်စီလူမျိုး သော်လည်းကောင်း နောက်ဆုံးအဖြေရှာခြင်း "The Final Solution"” ဟူ၍ပြင်ဆင်ဆောင်ရွက်တတ်သည်။ ၎င်းတို့သည် မိမိတို့၏ ရည်ရွယ်ချက် အစစ်အမှန်ကို ဖုံးကွယ်ရန် စကားနု၊ စကားယဉ်များ သုံးလေ့ရှိသည်။ ခေါင်းဆောင်များကလည်း "“သူတို့ကိုငါတို့ကမသတ်လျှင်၊ သူတို့က ငါတို့ကိုသတ်လိမ့်မည်"”ဟူ၍ ကြွေးကြော်တတ်ကြသည်။
၈။ ဖိစီးနှိပ်စက်မှု (Persecution)
ကျူးလွန်ခြင်း အပြုခံရသူများကို ၎င်းတို့၏ လူမျိုးအရသော်လည်းကောင်း၊ ကိုးကွယ်ရာဘာသာအရ သော် လည်းကောင်း ဖယ်ရှားရွေးထုတ်တတ်သည်။ ၎င်းတို့ကို စခန်းများ၌ သီးသန့်ထားတတ်ကြသည်။
၉။ သုတ်သင်ရှင်းလင်းခြင်း (Extermination)
ထိုအဆင့်တွင် ဂျင်းနိုးဆိုဒ်ဟု ခေါ်သော အစုလိုက်အပြုံလိုက်သတ်ဖြတ်ခြင်း စတင်ပေသည်။ သတ်ဖြတ်သူ များသည် သူတို့၏သားကောင်များကို လူဟူ၍ပင်မယူဆသောကြောင့် ၎င်းတို့အား သုတ်သင် ရှင်းလင်း သည်ဟုယူဆကြသည်။ နိုင်ငံတော်တစ်ရပ်က ကျူးလွန်ပါက ထိုနိုင်ငံရှိ ပြည်သူ့စစ်များနှင့် ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်ကြသည်။ တခါတရံ အုပ်စုများ အပြန်အလှန်သတ်ဖြတ်ခြင်းကြောင့် အခြေအနေမှာ အဆိုးရွားဆုံးသို့ နိမ့်ဆင်းလာသည်။
၁၀။ ငြင်းဆိုပယ်ချခြင်း (Denial)
ထိုအဆင့်သည် ဂျင်းနိုးဆိုဒ်ဖြစ်စဉ်ကာလနှင့် ပြီးမြောက်သည့် ကာလတွင်ဖြစ်ပေါ်လေ့ရှိသည်။ ထို အဆင့်ရောက်လျှင် ဂျင်းနိုးဆိုဒ်ဖြစ်ခဲ့သည်မှာ သေချာသလောက်ဖြစ်ပါသည်။ ကျူးလွန်သူများသည် မြေမြုပ် သဂြိုလ်ထားသော အလောင်းပုံများကို ဖော်ပြီး အလောင်းများကို မီးရှို့ဖျောက်ဖျက်ကာ မျက်မြင် သက်သေများကို ခြိမ်းခြောက်လာသည်။ ၎င်းတို့သည် အပြုခံ၊ အသတ်ခံရသူများကို အပြစ်ပုံချတတ်သည်။ မှုခင်းများလေ့လာစုံစမ်းခြင်းကို ပိတ်ပင်လာသည်။
မူရင်းဖတ်ရန် - Ten Stages Of Genocide Genocide Watch
Posted by Rohang king at 10:27 AM